घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू Takumi Minamino बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
टकुमी मिनामिनोको हाम्रो जीवनीले उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू चित्रण गर्छ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई जापानी पेशेवर फुटबलरको इतिहास बताउँछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाईंको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ ग्यालरी उठाउनको लागि एउटा सानो सानो झुकाव छ - टाकुमी मिनामिनोको बायोको एक सारांश।
प्रारम्भिक जीवन र टाकुमी मिनामिनोको उदय।
हो, सबैलाई आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाको बारेमा थाहा छ, एउटा घटना जसले उनको बृद्धि भएको छ एक उत्तम को रूप मा अन्तर्गत जर्गन क्लप्प खेलाडी जहाँसम्म, केवल एक हातले थोरैले हाम्रो टाकुमी मिनामिनोको जीवनीको संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Takumi Minamino बचपन कहानी:
टाकुमी मिनामिनोको जन्म १ 16 1995 January जनवरी जनवरीको १ day तारिख जापानको शहर इजुमिसानोमा उनका बुबाआमामा भएको थियो। उनको जन्म मिति टकुमी मिनामिनो परिवार र सम्पूर्ण जापानी जनताको लागि सबैभन्दा दुखद अवधिहरूसंग मिल्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… Takumi Minamino दुई दिन पछि जन्म भएको थियो महान हानशिन भूकम्प।
तल अवलोकन गरिए अनुसार हानशिन भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप थियो त्यो समय जापानको जीडीपी को २.%% को वरिपरि १० खरब येन (१०० अरब डलर) को क्षति संग विभिन्न परिवार पृष्ठभूमि बाट 6,434 व्यक्तिको ज्यान लिएको छ।
जापानको द ग्रेट हानशिन भूकम्पको दुई दिन पछि टकुमी मिनामिनोको जन्म भएको थियो।
एक प्राकृतिक प्रकोपको दुई दिन पछि जन्म भएकोले उसका बुबाआमा दुवैले सँगै खुशी र दु: खी बनाए। उहाँको जन्ममा जो एक व्यस्त भूकम्पको स्थितिमा भयो, टाकुमी मिनामिनोका अभिभावकले उनलाई उनको नाम दिए "टाकुमी" त्यस्को मतलब; “अन्वेषण र आफैंबाट फलफूल“। टकुमी मिनामिनोको शुरुआती बर्षहरूमा, उनका आमाबुबाले उनलाई उसको नाममा बाँच्नु पर्ने आवश्यकताको बारेमा सम्झाए। त्यसबारे बोल्दै, उनले एक पटक आफ्ना शब्दहरूमा भने;
“म सानो हुँदा मेरो आमाबुबाले मलाई मेरो नामको अर्थ कहिल्यै नदोहोर्याउन भन्नुहुन्थ्यो। यसले मैले के गर्नेमा सफल हुनको लागि मेरो कटिबद्धतालाई निरन्तर नवीकरण गर्दछ "।
परिवारलाई चिन्ने: टाकुमी मिनामिनोको परिवार कान्साई जापानी क्षेत्रमा अवस्थित जापानको किंकी जातीय समूहबाट भएको हो र यसले देशको ११% क्षेत्र ओगटेको छ।
यो नक्शाले टाकुमी मिनामिनोको परिवारको उत्पत्ति र जराको व्याख्या गर्दछ।
जापानी सुपरस्टार एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट छ। टाकुमी मिनामिनोका अभिभावक थोरै वित्तीय शिक्षाको साथ जापानी सामाजिक पदानुक्रमको बीचमा प्रायः नागरिकहरू जस्तो थिए। ऊ केन्टा मिनामिनो भन्ने आफ्नो जेठो भाईसँगै हुर्कियो।
फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन: टकुमी मिनामिनोको बलको लागि उनि बच्चाको उमेरमा शुरू भयो। सानो बच्चाको रूपमा (१ देखि aged वर्षको), उनले आफ्ना बुवा र ठूला भाई केन्टासँग मिलेर अभ्यास गरे। त्रिकाहरू फर्किए पछि बललाई उनीहरूको पारिवारिक घर र बगैंचामा उत्साहका साथ लात हान्थे। सम्पूर्ण फुटबल चीज यति रमाईलो भयो कि मिनामिनोका बुबाले एक अभ्यासको बारेमा सोचे जुन उनलाई राखिएको थियो प्रशिक्षण मार्कर कोन्स परिवार प्याकिंग धेरै। यसले उसका छोराहरूलाई कसरी ड्राईबल्स बनाउने भन्ने बारे सिक्न, प्रक्रियामा तिनीहरूको निर्धारणहरू निर्माण गर्दै.
टाकुमी मिनामिनो शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो टाकुमी मिनामिनोको जेठो भाई थियो जसले खेलकुदको सफलताको लागि परिवारको मार्गको गति तय गर्‍यो। केन्टाको भाइको उदाहरणको नेतृत्वमा उसले कूलर सकर टिममा भर्ना भयो जब प्राथमिक विद्यालयमा थिए। उदाहरणको साथ अगुवाइ गर्दै एक ठुलो भाई भएकोले, Takumi Minamino सामेल हुन प्रेरित गरियो कूबर सोकर आफ्नो प्राथमिक स्कूलमा हुँदा।
जबकि आफ्नो प्राथमिक तेस्रो कक्षा मा, Minamino (तल चित्रित) Zessel Kumatori FC मा सामेल हुनको लागि सारियो। फुटबल स्कूलमा, उनी भेटे र आफ्नो मिल्ने साथी सेई मुरोयासँग खेले। सेई मुरोया पनि मिनामिनोको साथ बालवाडीमा भाग लिनुभयो। निश्चित गर्नुहोस् पछि उनीहरू दुवैले सँगै ल्याए किनकि उनीहरूले जापानी राष्ट्रिय टोलीमा आफैंलाई भेटे।
निर्णय: 2002 बर्षको उमेरमा, Takumi हेर्ने भाग्यशाली थियो रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लिमा, रोनाल्डिन्हो, Rivaldo र कोरिया जापान २००२ विश्वकपमा ब्राजिलका अन्य सुपरस्टारहरू। टूर्नामेन्टले उनको जीवनमा नयाँ अध्याय सिर्जना गर्‍यो। यसले उनीमा नयाँ इच्छा ल्यायो, जसले उसलाई एक पेशेवर फुटबलर बन्न भाकल गरिरहेको देख्यो।
Takumi Minamino बचपन - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
स्कूल र फुटबल बीच छनौट गर्नको आवश्यकतामा, Takumi Minamimo को अभिभावकहरू एक शर्तसँग सहमत छन् कि उसले खेलको लागि आफ्नो शिक्षालाई पूर्ण रूपले सम्झौता गर्दैन। इलिमेन्टरी स्कूलबाट स्नातक गरेपछि, मिनोानोले भर्ना प्राप्त गर्‍यो Kokugoku उच्च विद्यालय जूनियर युवा। स्कूलमा फुटबल खेल्ने क्रममा उनी सेरेजो ओसाका फुटबल क्लबबाट चिच्याए जसले उसलाई उडान १ colors ट्रायलमा आमन्त्रित गर्‍यो जुन उनले उडान र colors्गका साथ पार गरे। तल देखाईएको अनुसार, उनले क्लबसँग जीवनको एक शानदार सुरुआत गरेका थिए।
टाकुमी मिनामिनोले आफ्नो युवावस्थादेखि नै आफ्ना विपक्षीहरूका विरुद्ध विध्वंश ल्याउन सुरु गर्यो।
टाकुमी मिनामिनोको पहिलो प्रतिस्पर्धी खेल सेरेजो ओसाकासँग आयो जब उनले यु -१ all सबै जापान क्लब युवा सकर च्याम्पियनशिपमा भाग लिए। उनी the गोलको साथ प्रतिस्पर्धामा शीर्ष स्कोररको रूपमा चम्किए। मा २०१०, होनहार फुटबलरले एशिया चैम्पियनशिप (एएफसी) अंडर १ Champion च्याम्पियनशिपमा पनि भाग लिए जहाँ उनी टूर्नामेन्टको शीर्ष स्कोरर पनि बने।
Takumi Minamino एक बच्चाको रूपमा प्रमुख च्याम्पियनशिप मा आफ्नो देश को प्रतिनिधित्व।
उच्च माध्यामिक विद्यालय पछि, जापानी स्टारले फुटबललाई आफ्नो पूर्ण-समय जागिरको रूपमा लिए, विश्वविद्यालयमा छाड्दै। मिनामिनोले २०१२ मा youth बर्ष (२०० to देखि २०१२ बीच) क्लबको लागि खेलेपछि आफ्नो युवा जीवनको अन्त्य भयो।
Takumi Minamino जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि मार्ग:
टाकुमी मिनामिनोले आफ्नो वरिष्ठ क्यारियरको शुरुआत जापान प्रोफेशनल फुटबल लिगको साथ एक राम्रो नोटमा गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको प्रदर्शनले उनलाई उनको पहिलो वरिष्ठ वर्षमा लीगको सर्वश्रेष्ठ युवा खेलाडी बन्न सकेको थियो। यो त्यहाँ बस रोकिएन, मिनामिनोले जापान पेशेवर खेलकुद पुरस्कार पनि पाए।
पढ्नुहोस् रोमन Pavlyuchenko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
यी पुरस्कारहरू जित्न केवल तब मात्र आउँदछ जब तपाईंसँग एक गुरूको साथ खेल्ने साथीको रूपमा लिजेन्ड हुन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मिनामिनोलाई पौराणिक कथाको साथ खेल्न सम्मानित गरियो डिएगो फोरलन आफ्नो प्रारम्भिक वरिष्ठ वर्षहरूमा। दुबै खेलाडीहरूले एक राम्रो स्ट्राइकिंग साझेदारी बनाए।
टाकुमी मिनामिनो उरुग्वे लेजेन्ड र गोल स्कोरिंग मेशीन-डिएगो फोरलानको साथ खेले।
उनले BIGGEST अवसर लिए: जब उनी बिरूद्ध खेल्थे ताकुमी मिनामिनोको सब भन्दा ठूलो चरण आयो शिन्जी कागवाको जुलाई २०१ in मा म्यानचेस्टर युनाइटेड।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनले सुपर गोल जसले उसको टीमलाई युनाइटेड (२-१) पराजित गर्न मद्दत गर्‍यो। टाकुमी मिनामिनोले युनाइटेडको बिरूद्ध खेल प्रयोग गर्‍यो र युरोपमा आफूलाई घोषणा गर्‍यो, जुन ठूलो क्लबले उनलाई ध्यान लिएको देख्यो। मुनिको युनाइटेड बिरूद्ध उसको सुपर गोलको भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा तल छ।
मिनामिनोको सफलता त्यहाँ रोकिएन। युनाइटेडलाई पराजित गर्न मद्दत गर्दै उनी पछि एमभीपी कमाउँदै थिए नुटी फूड कप २०१ competition प्रतियोगिता। सबै यूरोपीयन क्लबहरू मध्ये जसले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि माग्दै, यो थियो एफसी रेड बुल साल्जबर्ग त्यो प्रबल भयो। क्लबले मिनामिनोलाई जनवरी २०१7को 2015th तारिखमा हस्ताक्षर गर्यो।
Takumi Minamino जैव - फेम कथा मा उठ्नुहोस्:
Takumi Minamino एक सकारात्मक नोट मा यूरोप मा जीवन शुरू। आफ्नो पहिलो सत्र (२०१ 2017-१-18) को दौरान, उनले साल्जबर्गलाई उनको सर्वश्रेष्ठ युरोपियन अभियानमा सहयोग गरे। सँग उसको कम कुञ्जी स्थिति जान्ने अलोकप्रिय अस्ट्रियन लिग, टाकुमी मिनामिनोले यूईएफए यूरोपा लिगलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि उत्कृष्ट चरणको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
खेल योजना उत्तम थियो। सर्वप्रथम, उनले बोरोसिया डार्टमन्डलाई हराउन आफ्नो टीमलाई मद्दत गरे, जुन क्लब यूईएफए यूरोपा लिग सेमीफाइनलमा पहिलो पटक देखा पर्‍यो। त्यसपछि आई २० open२०२० season सीजनको यूईएफए च्याम्पियन्स लिगका नेत्र-ओपनर बन्नुभयो जसले उनको मिनामिनोको योजनाको पूर्णता देख्यो।
पढ्नुहोस् Shinji Kagawa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मिनामिनोले सल्जबर्गलाई २०१२/२०२० सिजनमा उनको सर्वश्रेष्ठ युरोपियन अभियान गर्न मद्दत गर्‍यो। ऊ सँगै गोल मशीन संग एरलि Bra ब्रुट हालान्ड आफूलाई प्रमाणित मुख्य कालो घोडा युरोपेली प्रतिस्पर्धा मा। २०१am/२०२० च्याम्पियन लिग अभियानमा एनिफिल्डमा रेडहरू विरुद्ध गोल गर्दा मिनामिनोको एउटा आकर्षक प्रदर्शन थियो।
टाकुमी मिनामिनो लिभरपूलको बिरूद्ध चैम्पियन्स लिगमा गुट नायक बन्न पुगे।
को कदर जर्गन क्लप्प, उनका लिभरपूल खेलाडीहरू, र लिभरपूल प्रशंसकहरू पनि ध्यान दिएनन् किनकि उनीहरू तुरून्तै अन्तर्गत पर्दछन् Minamino को जादू जादू। तलको भिडियोले उसको उल्का वृद्धिलाई जोड दिन्छ। Jurgen Klopp गरेको लाई प्रतिक्रिया मिनामिनोको जादुई प्रदर्शनहरू तल देखाइए जस्तै वास्तवमै अमूल्य छ।
फुटबल प्रशंसकहरूको आश्चर्यचकित गर्न विशेष गरी जापानी र लिभरपूल समर्थकहरू, जर्गन क्लप्प अन्तमा उसको हस्ताक्षरको लागि दौड जित्यो। जब म उसको बायो अपडेट गर्छु, फुटबलरको सहज वृत्ति उनको पहिलो प्रिमियर लिग गोल ल्याएको छ. बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Takumi Minamino सम्बन्ध जीवन:
उनको २०१२/२०२० च्याम्पियन लिग अभियानमा प्रसिद्धिमा र लिभरपूलमा सम्मिलित हुँदै, यो निश्चित छ कि धेरै जसो अ fans्ग्रेजी फ्यानहरूले ताकुमी मिनामिनोको प्रेमिका छ वा यदि उनी वास्तवमै विवाहित छन् भने चिन्तित भएको हुनुपर्छ।
त्यहाँ कुनै तथ्य छ कि उसको राम्रो देखिन्छ कि उसलाई सम्भावित प्रेमिका र महिला पत्नी सामग्री को इच्छा सूची मा राख्दैन जो आफ्नो हृदयको लागि तृष्णा छैन इन्कार छैन। यद्यपि सफल फुटबलरको पछाडि एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जसले धेरै जापानी ब्लगर्सका अनुसार नाम बोक्दछ रानी। तल टाकुमी मिनामिनो र उनकी प्रेमिकाको दुर्लभ २०१ photo फोटो हो रानी तिनीहरू सबै प्रिय भएको जस्तो देखिन्छ।
अफवाहका अनुसार, Takumi Minamino को साथ सम्बन्ध रानी उनले आफ्नो पूर्व प्रेमिकाको साथ विच्छेदन गरे जो नामबाट जान्छशिओरी'।
Takumi Minamino व्यक्तिगत जीवन:
टाकुमी मिनामिनोको व्यक्तिगत जीवन तथ्या football्क फूटबल गतिविधिहरूबाट टाढा जान्नाले तपाईंलाई उनको अनुपम व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
टाकुमी मिनामिनो निजी जीवन फुटबलबाट टाढा।
सुरू गरेर, Minamino पिच बन्द हास्य को एक महान भावना छ। ऊ मधेरै सामाजिक छ र साथीहरू र परिवारसँग समय बिताउन मनपराउँछ, विशेष गरी उनीहरूसँग जुन उस्तै परिवारको मूल हो। साथीहरूसँगको उनको सम्बन्धमा, tयहाँ कुनै प्रदर्शन छैनजंगलको एक राजा"स्थिति र क्यारियर अहंकार। Minamimo गरेको स्वस्थ हास्य भावनाको साथ अन्य व्यक्तिहरूसँग सहकार्य पनि सजिलो हुन्छ। यही कारणले गर्दा जापानीहरूलाई दुवै देश र विदेशमा माया गरिन्छ।
टाकुमी मिनामिनोको व्यक्तिगत जीवनलाई फुटबलबाट टाढा जान्न।
Takumi Minamino परिवार जीवन:
यस सत्रमा, हामी तपाईको आमाबुवाबाट टकुमी मिनामिनोको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा थप तथ्यहरू ल्याउँदछौं।
Takumi Minamino बुबा को बारे मा: को बारे मा जानकारी सुपर बुबा जसले आफ्नो छोराको क्यारियरको लागि जग बसाल्यो राम्रो मिडिया द्वारा कागजात गरिएको छ। जे होस्, यो पुष्टि भयो कि मिनामोनाको बुबा writing 55 बर्ष लेखेका छन्। भाग्यशाली बुबा उसको छोराले खेलेको प्रत्येक खेलको अनुगमनका लागि जिम्मेवार छ र उसलाई खेल पछि सल्लाह दिन्छ। उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने उपायको रूपमा, दुबै बुबा र छोरा अझै सँगै फुटबल हेर्न जान्छन्।
Takumi Minamino को आमाको बारेमा अधिक: टाकुमा मिनामिनोकी आमाको बारेमा धेरै कथा छैन। जे होस्, हामीलाई थाहा छ उनी एक राम्रो रोल मोडेल हुन् र पहिलो व्यक्ति मिनामिनो कहिल्यै जान्दछन्। यद्यपि, जानकारी अवस्थित छ कि टकुमा मिनामिनोको आमाले प्रत्येक चोटि उसले फुटबल अभ्यास समाप्त गरेपछि कारमा उनलाई उठाउने जिम्मेवार थियो।
Takumi Minamino भाइ बहिनीहरू को बारे मा अधिक:: गहन अनुसन्धानबाट गरिएको निर्णयलाई हेरेर, यो देखिन्छ कि Takumi Minamino को कुनै बहिनी छैन। हामीले उसको काका वा काकीको बारेमा कुनै जानकारी पाएनौं। यद्यपि उनका कान्ता नामको जेठो दाइ र दुई अन्य भाइहरू छन् जो उनीहरूको बारेमा धेरै कम मात्र जान्दछन्।
पढ्नुहोस् अक्सिको कोकोरिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
टाकुमी मिनामिनोको भाई कान्ता उनी भन्दा years बर्ष जेठो छ जसको मतलब उनी लेखनको समयमा २3वर्षको छन। मिनामिनोले आफ्नो भाइलाई फुटबलमा रुचि कहिल्यै गुमाउदैन भनेर श्रेय दिन्छन्। दुःखको कुरा, केन्टा, आफ्नो साना भाईले जस्तो कहिल्यै फुटबलको साथ आफूलाई प्रसिद्ध बनाएनन्। अज्ञात कारणहरूले मार्च २०१० मा उनले खेल छोडे।
Takumi Minamino जीवनशैली:
अनुसार एक्सप्रेस खेलहरू, टाकुमी मिनामिनोको प्रति वर्ष £ २.m मिलियनको तलब भत्काउन प्रति हप्ता who ,2.5£,००० लाई भत्काउन सकिन्छ। यी रेड बुल साल्जबर्गका लागि उसको आंकडा थिए जुन पक्कै थियो लिभरपूलमा सामेल भएपछि बढ्यो।
तपाईंले धेरै पैसा कमाउनु पनि आवश्यक दुष्ट छ, टाकुमी मनामिनो महँगो जीवनशैलीको स्फूर्तिदायी औषधी हो। लेख्ने समयमा, उनले आफैलाई आकर्षक जीवनशैली बाँचिरहेको देख्दैनन् जो फ्ल्याश कार र हवेली आदिले सजीलै सजीलो देखिन्छ।
टाकुमी मिनामिनोको जीवनशैली तथ्यहरू। छवि क्रेडिट: लिभरपूल, एक्सप्रेसयुके र जिम uu
मिनामिनो एउटा नम्र जीवनशैली बिताउँछिन्, जसले उसलाई तर्कहीन खर्च गर्नबाट जोगाउँदछ र व्यावहारिक आवश्यकताहरू समात्छ जुन धेरै खर्च हुँदैन।
टाकुमी मिनामिनो अनटोल्ड तथ्यहरू:
गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर: जापानको राम्रो व्यक्तिको दैनिक ब्लगका अनुसार, Takumi Minamino छ जुनियर हाईस्कूल दिनदेखि गिनीज रेकर्ड होल्डर। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनले एक पटक गिनी रेकर्ड राखेका थिए "बलको साथ निरन्तर उच्च स्पर्शको एक मिनेट".
उनले एक पटक उनको उपनाम अस्वीकार गरे: केही वर्ष पहिले आफ्नो ख्याति अघि, Minamino एक पटक सम्बोधन गर्दा आफ्नै व्यक्तिगत प्राथमिकता स्पष्ट 'जापानी नेमारउपनाम त्यस पछि उनले कहिल्यै उपनाम स्वीकार गरेनन उनले आफू पर्याप्त राम्रो नभएको दावी गरे। Minamino एक पटक गर्न एक साक्षात्कार मा भने रेड बुल साल्जबर्ग वेबसाइट;
“म आफूलाई तुलना गर्न चाहन्न नेमार सबैमा। के म जहिले पनि उहाँ जस्तै राम्रो हुन को लागी व्यवस्थापन गर्न सक्दछु, तब म खुशीले मेरो उपनाम स्वीकार गर्दछु।
भाग्यले उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी ल्यायो: यस लेखमा पहिले भनिएझैं टाकुमी मिनामिनो र सेई मुरोया बाल्यावस्थाका सर्वश्रेष्ठ साथीहरू हुन् जुन उनीहरूको बालवाडी दिनमा फुटबल खेल्ने क्रममा भेटे। दुबैले उनीहरूको फुटबल यात्रामा विभिन्न सकारात्मक पथहरू लिए। तिनीहरू दुबै सफल भए र भाग्यले तिनीहरूलाई फेरि सँगै ल्यायो, यस पटक को रियो दि जेनेरियो ओलम्पिक खेलहरू आफ्नो प्यारो देश जापान प्रतिनिधित्व गर्दा।
टाकुमी मिनामिनो र सेई मुरोया बाल्यावस्थाका सर्वश्रेष्ठ साथीहरू थिए जसले आफ्ना बालवाडी बर्षमा सँगै फुटबल खेले।
निस्सन्देह, विश्वले राष्ट्रिय स्तरमा यी केहि बाल्यकाल भाग्य बैठकहरू देखेको छ। एउटा राम्रो उदाहरण हामी जान्दछौं जुन त्यो बीच हो मेसन माउन्ट र डेक्लान चावल.
टाकुमी मिनामिनो धर्म: धेरै जसो जापानीजहरू जस्तै यो पनि सम्भव छ कि टकुमी मिनामिनोका अभिभावकहरूले उनलाई धर्मपुत्र बनाएका थिए शिन्टो वा बौद्ध धार्मिक सिद्धान्तहरू। यद्यपि उनको धार्मिक अभ्यासको फोटो प्रमाणको अस्तित्वले हामीलाई उनी नास्तिक पनि हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
Takumi Minamino टैटू तथ्य: ट्याटु संस्कृति आजको फुटबल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। लेखनको समयमा मिनामिनो ट्याटुमुक्त छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार उसको माथिल्लो र तल्लो शरीरमा कुनै मसीहरू छैनन्।
टाकुमी मिनामिनो ट्याटुलेस छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Takumi Minamino बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
जापानी फुटबल डायरी